Mampiasa vera ny efitra fandroana hanavahana ny lena amin'ny maina, izay mamiratra sy malalaka
Faucets an-dakozia, Faucets mpameno vilany, Faucets fandroana | WOWOW
Fitaovana famaohana bar
Solon-trondro mameno rano
Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa
Home / Blog / Mampiasa vera ny efitra fandroana hanavahana ny lena amin'ny maina, izay mamiratra sy malalaka
2020 / 12 / 05 FisokajianaBlog 7511 0
Sekoly fandraharahana mandeha amin'ny trano fandroana
Ny efitra fandroana dia azo zaraina ho faritra fandroana, faritra fidiovana ary faritra fikolokoloana araka ny asany. Ny faritra mandro ihany no mando indrindra, noho izany ilaina ny manasaraka ny lena amin'ny maina. Izany dia hiantoka fa maina ny faritra fidiovana sy ny freshening ary tsy dia hidona intsony. Manoro hevitra anao ny hampiasa partition vera hanavahana ny lena sy ny maina ao an-trano fandroana, ary ny efitra fandroana dia ho toa be rivotra sy mamiratra kokoa!
Ny fisarahana fitaratra dia afaka manasaraka ny faritry ny fandroana amin'ny sisa amin'ny efitrano, ka misaraka ny faritra lena sy maina, nefa mamirapiratra sy mangarahara koa izy io, mba hahafahan'ny jiro mandalo ary tsy dia kely loatra ny fandroana.
Ny fizarazaran-vera koa dia afaka mihetsika toy ny fitaratra ampahany, mahatonga ny fandroana ho malalaka kokoa. Marina indrindra izany ho an'ny trano fandroana izay misaraka havia sy havanana.
Raha malalaka kokoa ny trano fandroana dia azonao atao koa ny mametraka fandroana bebe kokoa ao anaty fandroana. Mampisaraka ny fandroana, ny fidiovana ary ny milentika ny fizara-vera, nefa toa mbola eo amin'ny toerana iray ihany izy ireo
Raha tsapanao fa ny fizarazaran-vera dia tsy manome tsiambaratelo ampy, azonao atao ihany koa ny mieritreritra ny hampiasa fisarahana vera misy fizara-rindrina mba hanomezana tsiambaratelo anao.
Toy izany, eo amin'ny zoro no misy ny fandroana. Raha tsy mampiasa fizara fitaratra ianao dia tsy misy jiro afaka manipy ao. Ny toerana fandroana kely toy izany dia mety hahakivy indrindra.
Ary koa, ny fizara amin'ny vera dia mety ho fomba maro. Ny fizarazarana fitaratra dia azo ampiasaina amin'ny fomba fandroana rehetra. Tsara lavitra noho ny fizarana marbra na hazo sarotra hafa io.
Manana toerana tena ankafizinao amin'ireo efitrano fidiovana misy habakabaka sy kanto ireo ve ianao? Raha mbola fizarazaran-vera no ampiasaina dia azo itarina amin'ny teboka maromaro ny fandroana. Tsy maninona ianao dia Mediteraneana, minimalist, na mahazatra mahazatra, azonao atao ny manampy fizarana vera eo afovoany mba hampisaraka ny lena sy ny maina nefa tsy misy fiatraikany amin'ny ankapobeny amin'ny fandroana fandroana!
Previous :: Iza no tsara indrindra amin'ny fatana fikotranana ao an-dakozia? Next: Taorian'ny Nahitako Ilay Drafitra Doboka In-droa Tao An-tranon'olona Iray, dia Nialona aho!
Delta Shower Faucet: 2021 Buying Guide ho an'ny Delta Shower Faucets
2021 / 02 / 04 3475
Delta Kitchen Faucet hevitra: 2021 Buying Guide for Delta Kitchen Faucets
2021 / 02 / 03 3834
Ao amin'ny efitrano fandroana Japoney, ny kabinetra lamba famaohana dia manify hatramin'ny 10 santimetatra, mitahiry tsara
2021 / 01 / 16 6158
Na dia latsaky ny 5 metatra toradroa aza ny efitrano fandroana, ny fisarahana mando sy maina dia ...
2021 / 01 / 15 5311
Tonga ny ririnina! Tokony hividy kojakoja fandroana thermietika ve aho? Henoy Ireo Manam-pahaizana, Tsia ...
2021 / 01 / 15 6080
Mamolavola ny fandroana ao an-trano mba ho tsara tarehy sy hanana endrika tsara ao amin'ny Showe ...
2021 / 01 / 11 6644
ZON'NY VOA-TANANA INTELLECTUAL